Fanampiana ireo traboin’ny rivodoza : Fotoana izao hanehoana firaisankina, hoy ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaFanampiana ireo traboin’ny rivodoza : Fotoana izao hanehoana firaisankina, hoy ny Filoha
20/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Toa ny efa fanaon’ny Fitondram-panjakana izay tarihin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina manoloana ny voina mahazo ny vahoaka handalovan’ny rivodoza, dia tsy nitazam-potsiny ny Filoha fa nidina an-tsehatra avy hatrany nijery ireo traboina vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim. Nanomboka omaly,dia manao sidina mitety ny tapany Avaratra ny Nosy ny Filoha sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta mitondra fanampiana ho an’ireo traboina, toa ny vary 400 gony, voamaina 600 gony, fanitso sy kojakoja fanamboarana trano. Satria trano maro no dibo-drano sy rava nandritra iny fandalovan’i Eliakim iny. Mba hialana amin’ny fahavoazana be tahaka izao dia nanambara ny Filoha Rajaonarimampianina Hery fa hametraka drafitra maty paika hiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro. Tafiditra amin’izany ny fametrahana fotodrafitrasa mitsinjo lavitra, toa ny fanorenana trano sekoly, hopitaly ary tetezana tsara fototra. Nilaza ihany koa ny tenany ho fampanantenana ireo olona niharan’ny voina fa tsy matory andro aman’alina ny fitondram-panjakana ho fanampiana ireo traboina ka noho izany, fotoana izao hifanomezana tanana, hanehoana firaisankina.
“Fotoana tokony hifanomezan-tanana izao ho fanampiana ireo traboina. Mila mifanampy isika amin’ny andro sarotra, hanehoana firaisankina izay natombontsika nandritra ny taona maro, ary mbola tohizana satria ao anatin’izany ihany no hanatanterahana ny fanamby napetraka. Araho ny toromarika omen’ny mpamantatra ny toetr’andro, ary mahaiza mifanohana sy mifanampy fa mbola vonona hanome tanana ny vahoaka ny Filoham-pirenena. Manana ray aman-dreny te-hampandroso sy te-hifanampy ianareo”, hoy ny Filoha Rajaonarimampianina, nanome toky ireo olona niharam-boina. Nohamafisin’ny Filoha koa fa tsy maintsy tanterahiny ny fampanantenana natao, ka niantso ny mponina hifanome tanana sy hifanampy ary hametraka fitokisana aminy fa vonona ny Filoham-pirenena hanao fotodrafitrasa matotra sy mateza. “Mahaiza manavaka sy mijery ny ho avy fa tsy hanary anareo ny Filohan’ny repoblika. Ny tanjona dia ny fisandratana amin’ny fanatanterahana ny fanamby miaraka amin’ny mponina”, hoy hatrany ny toky nomen’ny Filohan’ny Repoblika, Rajaonarimampianina Hery. Fantatra moa fa ampolony maro ireo namoy ny ainy tamin’iny fandalovan’i Eliakim iny, ary 21 000 any ho any ireo traboina. Manodidina ny 7 000 any ho any indray ireo nafindra toerana, raha toa ka an’arivony ireo trano dibo-drano, ary 600 mahery ireo trano rava ka iny faritra Antsiranana iny, indrindra ny distrikan’Ambilobe no tena voa mafy tamin’iny fandalovan’ny rivodoza iny.